Afak’omaly talata alina tokony ho tamin’ny 10 ora no voalaza fa nitrangan’ny loza ka ny tafo iray manontolo niampy ny ampahany lehibe tamin’ny rindrina no lasibatra. Ny tilikambo sy ny trano vadim-piangonana sisa no nijoro. Voatery narodana ihany koa ireo sisa mbola nijoro mba hiarovana ny loza mety hanjo ny mpandalo. Voatsindry tao avokoa ny fanaka rehetra nijanona tao am-piangonana. Tsiahivina moa fa dia herim-pon’ireo mpino ao an-toerana avokoa no nahavitana ny fanavaozana ity fiangonana ity amin’izao endriny ankehitriny izao ankoatra ny fanampiana avy amin’ireo malala-tanana sy tsara sitrapo samihafa. Mangataka fanampiana sy tolo-tanana avy amintsika rehetra ireo mpino sy ny fitandremana FJKM Vohidiala Finoana, mba hifanohana amin’izy ireo. Lohalaharana amin’izany ireo namana sy ny zanaka am-pielezana rehetra. Ny laharam-pinday 034 48 309 93 moa no hahafahana mifandray amin’izy ireo mivantana.